10 Uninzi lweeMpawu zeNdawo eziDumileyo zokundwendwela | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Uninzi lweeMpawu zeNdawo eziDumileyo zokundwendwela
Inomdla kuyilo loyilo, esisityebi kwimbali, kwi izixeko ezininzi ezintle emhlabeni, i 10 Iimpawu zomhlaba ezidumileyo zokutyelela ngomzila omele ube kuwe bucket uluhlu. Ukusuka eYurophu ukuya eTshayina, ngesango elidumileyo laseBerlin, nakwisiXeko esingavumelekanga, nantsi inyikima kwiimpawu zomhlaba eziza kukushiya umangalisiwe.
Kunzima ngokwenene ukuphoswa lolu phawu lumangalisayo, 300 Iimitha eziphakamileyo zentsimbi. Nokuba uhambahamba eLe Marais, UMama wethu, okanye ikota yesiLatin, Lo mfanekiso mkhulu waseParis uza kubonakala maxa onke.
ke, ukuba uhambela eParis okokuqala, Ngokuqinisekileyo uya kundwendwela i-Eiffel Tower emini nasebusuku ukuze ujonge i-Eiffel yonke ikhanyisiwe. ngoko ke, kuya kufuneka ululungele kakuhle utyelelo lwakho kwaye uyazi ukuba eyona ndlela yokuhamba uye e-Eiffel Tower eParis, okanye naphi na eYurophu.
Ufika njani kwi-Eiffel tower ngololiwe?
Eyona nto intle ukuya e-Eiffel Tower ngololiwe. the Ukuhanjiwa kawonke-wonke Inkqubo eParis isebenza kakuhle kwaye ikhululekile. Ukuhamba ngaphaya kwe-arrondissements kunye neempawu zomhlaba kulula kakhulu, kunye nendawo ephakathi ye-Eiffel Tower esixekweni kuthetha ukuba idityaniswe kakuhle kuloliwe waseFrance.
I-Champ de Mars / iTyelelo i-Eiffel sesona sikhululo sikaloliwe sikufutshane, kwaye i-Eiffel Tower ilungile 2 imizuzu ukuhamba ukusuka kwisikhululo. kunjalo, Ukuhla kwisikhululo seTrocadero kuya kubonelela ngemibono yomlingo wenqaba kunye neSeine. Ungathatha iRER Line C uye kwiEiffel Tower qho ngemizuzu embalwa, kwaye itikiti metro yohambo olunye yi € 1.9.
2. Uninzi lweeMpawu zeNdawo eziDumileyo zokundwendwela ngololiwe: Udonga Olukhulu Lwe China
Eyona ndawo inkulu eyenziwe ngumntu emhlabeni, yi-Great Wall yase China yathatha 2000 iminyaka yokwakha. Ulwakhiwo lokuqala lodonga lwaqala ekuqaleni kwenkulungwane ye-7, kwaye kamva iindonga ezongeziweyo zongezwa ukomeleza kunye nokuguqula i-Great Wall yase China ibe yenye yezona ndawo zibalulekileyo nezikhathaza ingqondo kwihlabathi..
Kuba i-Great Wall yase China inkulu kakhulu, ungayibonga kwabaninzi iindawo kwiChina, kwaye ungathatha ukuya 175 iintsuku zokuwela ngokupheleleyo. kunjalo, eyona ndawo ifanelekileyo yokuncoma i-Great Wall yase China yi-Beijing, Amadlelo aseBeijing, kunye needolophu ezinje ngeBadaling. Ukushwankathela, Udonga Olukhulu lobukhulu base China, ukubaluleka kwimbali, kunye noyilo lwangaphandle-lwehlabathi luyenza enye ye 10 Iimpawu zomhlaba ezidumileyo zokutyelela ngomzila.
Ufika njani kuDonga oluKhulu lwase China ukusuka eBeijing?
Kuya kufuneka uye kwiSikhululo esiHuoying ngololiwe ongaphantsi okanye uthathe umgca weAirport Express. Ukusuka kwisikhululo sikaloliwe i-Huangtudian uthathe uloliwe u-S2 uye kwisikhululo sikaloliwe i-Badaling. Uya kubona umnyango woDonga oluKhulu kwimizuzu engama-20 uhamba usuka kwisikhululo sikaloliwe.
3. Uninzi lweeMpawu zeNdawo eziDumileyo zokundwendwela ngololiwe: ISistine Chapel Vatican City
Iifresco ezintle zikaMichelangelo ziindwendwe ezimangalisayo kangangeminyaka. I-Sistine Chapel kwi esikaPhapha Kungcono ukutyelela ngolwesiHlanu ngokuhlwa nobusuku ehlotyeni xa kungaphantsi kwabantu. Owona msebenzi wobugcisa mkhulu kwihlabathi ufikeleleka kwiimyuziyam zaseVatican, kwaye awudingi ukubhukisha ixesha lokungena.
I-Sistine Chapel ibizwa ngegama likaPopu wesithandathu, eyakhe ngenkulungwane ye-15. Ngaloo ndlela, Iifresco ezihombise isilingi kwi-Sistine Chapel zibonisa iintsomi ezivela kwincwadi yeGenesis. Ngemibala epeyintiweyo kunye nemibala, iifresco zigcinwe kakuhle, kwaye unokuchitha ngokulula usuku lonke uncoma imiboniso.
Ufika njani kwi-Sistine Chapel yaseRoma?
I-Sistine Chaple ikwisiXeko saseVatican, ngaphandle kweRoma. ke, ukuba undwendwela eMilan, IFlorence okanye enye indawo eYurophu, Kuya kufuneka uqale uthathe i- -High speed ngololiwe eRoma. ke, thatha uloliwe ukusuka eRoma Tiburtina ukuya e-Roma St.. Isikhululo sePietro, kwaye 14 imizuzu yokuya eSistine Chapel.
4. ICharles Bridge Prague
Ukusuka eBudapest okanye eVienna, akuzange kube lula ukuhamba eCharles Bridge ukusuka nakweyiphi indawo eYurophu. Ayothusi loo nto, kuthathelwa ingqalelo into yokuba iCharles Bridge ePrague yenye yezona ndawo zidumileyo zokundwendwela ngololiwe. Ibhulorho yelitye ye-gothic, imifanekiso eqingqiweyo, indawo esembindini phakathi kweMala Strana kunye nedolophu yakudala, zizizathu nje ezimbalwa zobuqaqawuli bayo.
Ngaphezu, ICharles Bridge yenye yezona bhulorho zintle nezindala eYurophu. ngoko ke, uya kudibana namakhulu abakhenkethi bekhangela eyona intle I-Instagram pic indawo kwi Bridge. Ewe, nangaliphi na ixesha lomhla nonyaka, Uya kujoyina iindwendwe ezininzi ePrague ukuze uncome enye yezona ndawo zidumileyo ehlabathini.
Ufika njani eCharles Bridge ngololiwe?
zokuhamba Qeqesha eYurophu ikhululekile kakhulu kwaye iyakhawuleza, ukuze uye eCharles Bridge kulo naliphi na ilizwe elingummelwane. Ukusuka kwisikhululo sikaloliwe esikhulu (Ngolwimi lwasekuhlaleni: Isikhululo esiPhakathi), imalunga 13 imizuzu ngemetro ukuya eCharles Bridge. Unokufika apho ngeenyawo, yi 25 ukuhamba imizuzu ukuya eCharles Bridge kwisikhululo sikaloliwe, kodwa kunconywe kancinci ukuba ufika eDresden, Budapest, okanye iZermatt.
5. Uninzi lweeMpawu zeNdawo eziDumileyo zokundwendwela ngololiwe: st. I-Basil's Cathedral yaseMoscow
Enye yezona zininzi izikwere ezinomtsalane emhlabeni, iRed Square eMoscow ilikhaya lecawa ebalaseleyo. st. I-Basil's Cathedral iyamangalisa, nge 6 iicawa, kakuhle kwaye ngobugcisa zipeyintwe iipateni zejiyometri. Indlu entle yecawa yecawe entle intle ngaphakathi nangaphakathi, Icawa nganye ihonjiswe ngemikrolo nemizobo.
st. I-Basil's Cathedral yenye yeempawu eziphambili zaseMoscow kwaye yakhiwa njengophawu loloyiso lokoyiswa kuka-Terrible Ivan, uKhan waseKazan. Ngaloo ndlela, kusukela 1561 Itsala izigidi zabakhenkethi minyaka le ukuze babone 1 kwezona ndawo zibalaseleyo eRashiya.
Ufika njani eSt. Icawa yaseBasil?
I-Cathedral yaseSaint Basil iseRed Square, kwaye ungathatha umgaqo ongaphantsi komhlaba ukusuka kwisikhululo saseLeningradsky ukuya e-Okhotny Ryad. Ukuba ufuna ukubona eyona Russia, emva koko uloliwe ohamba ngesantya esiphezulu esuka eSt. Petersburg yeyona ndlela ifanelekileyo yokuhamba.
6. Ibhotwe lasePeterhof eSt. Petersburg
IVersailles yaseRussia yakhiwa nguPeter Omkhulu njengelizwe lakhe. Kwiifayile zakho uhambo oluya ePeterhof Palace, uza kutyelela iPaki esezantsi, Igadi ephezulu, Umjelo woLwandle, namabhotwe amabini amancinane – Monplaisir kunye neMarli Palace. UPeter Omkhulu otyelele iVersailles kwii-1770s kwaye waqonda ubugcisa baseFrance bube yenye yezona ndawo zidumileyo eRashiya namhlanje..
Ibhotwe likaTsar lidume kakhulu ngemithombo, Imilambo enkulu, Imifanekiso eqingqiweyo yebhayibhile, nezitiya. AmaJamani ayitshabalalisa le bhotwe libalaseleyo kwiWWII kodwa ayilungisa ngempumelelo ukuze ibe UNESCO zamagugu isayithi.
Ufika njani kuPeterhof?
Ibhotwe lasePeterhof lelinye leempawu eziphambili zokundwendwela eSt. Petersburg. Ungahamba uye ePeterhof ngololiwe ukusuka eBaltiskiy Station ukuya eNoviy Peterhof Station.
7. Uninzi lweeMpawu zeNdawo eziDumileyo zokundwendwela ngololiwe: IRoma yaseColosseum
IColosseum yenye yezinto ezisixhenxe ezimangalisayo kwihlabathi lanamhlanje, ke, kungcono ukutyelela iColosseum ngotyelelo olukhokelwayo. kungenjalo, i yonke imbali etyebileyo kolu lwakhiwo lukhulu luya kulahleka ngenxa yakho. Abalawuli beFlavian bakha lo msebenzi wobugcisa njengendawo yemidlalo yeqonga, ngengcinga yokukhusela izihlwele kwimvula nomoya, engqondweni.
Namhlanje ungatyelela onke amanqanaba eColosseum, okanye uyithande kwiindawo ezininzi zokutyela kunye neefestile ezikufutshane. Ukwengeza, eyona colosseum inkulu yakha yakhiwa, isetyenziswa namhlanje njenge Indawo yekonsathi yomculo. Apha, Uya kubona awona magama makhulu kwihlabathi lomculo, njengoElton John.
Ufika njani kwiColosseum?
Unokufikelela kwiColosseum kuzo zombini izikhululo zeenqwelo moya eRoma, ngololiwe. Kukho oololiwe abashiya yonke into 15 imizuzu ukuya kwisikhululo seTiburtina, emva koko nge-metro ngqo kule icon yase-Itali. Ngokucacileyo, Kulula kakhulu ukufika kwiColosseum kwiziko lembali eRoma.
8. Uninzi lweeMpawu zeNdawo eziDumileyo zokundwendwela ngololiwe: IWestminster Palace eLondon
Eyona ndawo idumileyo eNgilane yiWestminster Palace kunye neBig Ben Tower. Izindlu zePalamente. IVictoria Tower kunye nenqaba edumileyo emhlabeni, Big Ben, yakha eyona ndawo idumileyo eNgilane.
Ngaphezulu komlambo iThames, ngomtsalane wamehlo aseLondon kufutshane, Isimo esiku-Westminster Palace sihle kakhulu. Ngeembono ezimangalisayo zepanoramic, Ndwendwela i-London Eye unyaka wonke, kuba ukungena eWestminster kunokwenzeka kuphela ngeMigqibelo, ngoJulayi nango-Agasti.
Ufika njani kwiNdlu yaseWestminster kunye neBig Ben?
Thatha umgca wesangqa ukuya eWestminster okanye kwizikhululo zeTrafalgar. Ukuba ufika kwiidolophu zelondon, naphi na e-UK okanye eYurophu, emva koko iSouth Railway iya kuba yeyona ndlela ihamba phambili.
9. Isixeko esingavumelekanga eTshayina
Kwintliziyo yaseBeijing, uya kufumana isango lelona bhotwe likhulu emhlabeni. Mkhulu kunoPeterhof, iLouvre, Indawo yesicelo, kunye neVatican, I-City City engavumelekanga inayo 980 izakhiwo zebhotwe zokuhlola. Ngokuchasene nezinye iimpawu zomhlaba, le yonke yenziwe ngomthi. nge 25 Abalawuli baseTshayina babehlala kwibhotwe ngaphambili, IsiXeko esingavumelekanga sisona sakhiwo sikhulu semyuziyam ehlabathini.
Indawo ephawuleka ngokungaqhelekanga izuze igama layo kule mihla. Oku kungenxa yokuba 40% Ibhotwe lisalelwe kwiindwendwe. kunjalo, usenokubona bonke ubunzima ukusuka kwinduli eseJingshan Park. IsiXeko esingavumelekanga asinakuba sesinye sezixhobo uninzi lwamabhotwe amibalabala kwaye amnandi eYurophu, kodwa inomdla kakhulu.
Ndifikelela Njani KwisiXeko Esingavumelekanga?
I-Shanghai ukuya eBeijing imalunga 5 iiyure ngololiwe, kodwa eBeijing, ungathatha i-metro ukuya kwiSixeko esingavumelekanga.
10. Uninzi lweeMpawu zeNdawo eziDumileyo zokundwendwela ngololiwe: Isango laseBrandenburg eBerlin
Isango laseBrandenburg yeyona ndawo ibalulekileyo eBerlin, njengoko iluphawu lweKhethini Yentsimbi kwaye yahlulahlula iBerlin. Isango ekuqaleni lalakhiwe nguKumkani wasePrussia uFrederick William II, ngenkulungwane ye-18. Ngaloo ndlela, eyona ndlela ifanelekileyo yokufunda ngembali ngasemva kwale icon, ngokufutshane kwaye ngelixa udibana nabanye abahambi, lukhenketho lokuhamba olukhokelwa.
Emva kwemini nangeempelaveki, IParis Platz iba liqonga lamagcisa kunye neemvumi zalapha ekhaya. Unokungqina abantu bendawo behamba ngebhayisikile ngesango kwaye uhleli nje, ukuncokola, ulinde imitha yelanga ukujonga esangweni.
Ndifika Njani kwiSango laseBrandenburg?
Eyona ndlela ilula yokuya kwiSango laseBrandenburg yimigca ye-S-Bahn, inkqubo yangaphantsi. Thatha nawuphi na umgca oya kwisikhululo seTrandenburger Tor.
Ukushwankathela, indawo, ukubaluleka kwimbali, bokwakha, kunye nobukhulu bezi ndawo zibalulekileyo zitsala izigidi zabakhenkethi minyaka le. Njengoko umi phambi kwalo lonke uphawu lomhlaba, eYurophu, Rhashiya, okanye iChina, umangaliswe bubuhle kunye nokudalwa kwayo yonke indawo.
Apha Gcina A Isitimela, singavuya ukukunceda ucwangcise enye yezi 10 Iimpawu zomhlaba ezidumileyo emhlabeni ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "I-10 yeempawu eziDumileyo eziDumileyo zokundwendwela ngololiwe" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fmost-famous-landmarks-visit-rail%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / de ku / kwaye iilwimi ezininzi / fr okanye.